Ithuluzi Lokulungisa IZwi. I-Software Recovery Software. Buyisela amafayela we-DOC & DOCX.
DataNumen Word Repair iyona best Ithuluzi lokulungisa nokubuyisa iZwi emhlabeni. Ingalungisa imibhalo ye-Word doc & docx eyonakele noma elimele futhi ibuyise idatha yakho ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela inciphise ukulahleka ekonakaleni kwefayela.
Kungani DataNumen Word Repair?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile womkhiqizo wokutakula iZwi. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen Word Repair inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen Word Repair kubhema umncintiswano
I-Landis + Gyr Poland Sp. z oo
Unjiniyela we-physicist https://helpwithphysics.com
Hawu nkosi yami, NGIYABONGA! Angikholwa ukuthi ukwazile ukukulungisa! Ngizamile ngokoqobo konke okunye - lokhu kuyamangalisa, futhi nginjalo
Ngeneliseke kakhulu. Ngincoma wonke umuntu. Ngifisa ukuthi wena
Isixazululo Sokulandela Amaphutha Ajwayelekile Ngenxa Yenkohliso Yemibhalo Yamagama
Ifayela le-xxxx.docx Alikwazi Ukuvulwa Ngoba Kunezinkinga Ngokuqukethwe
IZwi Libe Nephutha Lokuzama Ukuvula Ifayela
Ibhokisi Lokuguqulwa Kwefayela Vuka lapho Uvula Idokhumenti Yezwi Elikhohlakele
Izithombe Azikwazi Ukuboniswa Emibhalweni Yezwi Ekhohlakele
Izici eziyinhloko ku DataNumen Word Repair v4.2
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 kanye nemibhalo ye-Word for Office 365.
Imibhalo yokusekela eyenziwe yi-Word for Windows and Mac.
Ukusekela ukuthola kabusha umbhalo, izithombe nokufometha kumadokhumenti e-Word.
Ukusekela ukuthola amatafula.
Ukusekela ukuthola uhlu olunamachashazi noma olunezinombolo.
Ukusekela ukuthola kabusha ukufomatha nama-hyperlink.
Ukusekela ukuthola amabhukumaka.
Ukusekela ukuthola kabusha idokhumenti ye-Word kusuka kuthempelirary lapho kwenzeka inhlekelele yedatha.
Ukusekela ukulungisa amafayela we-Word doc ne-docx kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela we-Word doc ne-docx.
Ukusekela ukuthola nokukhetha imibhalo ye-Word ezolungiswa kukhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayela le-doc ne-docx ngomongo (chofoza kwesokudla) imenyu yeWindows Explorer kalula.
Imingcele ye-Support line line (DOS prompt) yokulungisa amafayela we-Word.
Ukusebenzisa DataNumen Word Repair Ukubuyisa Imibhalo Yezwi Ekhohlakele
Lapho imibhalo yakho ye-Word (* .DOC kanye * .DOCX amafayela) onakalisiwe noma onakalisiwe futhi ungakwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen Word Repair ukuskena amafayela weZwi uphinde uthole idatha eningi ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yiliphi ifayela leZwi elonakele noma elonakele nge DataNumen Word Repair, sicela uvale i-Microsoft Word kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela kufayela le-Word.
Khetha ifayela elonakele noma elonakele le-Word .doc / .docx elizolungiswa:
Ungafaka igama lefayela le-Word .doc / .docx ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola ifayili elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen Word Repair izogcina ifayela leZwi elihleliwe njenge-xxxx_fixed.doc, lapho i-xxxx igama lomthombo wegama elithi .doc / .docx file. Isibonelo, kufayela lomthombo wegama elithi Damaged.docx, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba iDamaged_fixed.doc. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho. DataNumen Word Repair intando start ukuskena nokulungisa ifayili le-Word source.
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ifayili lomthombo leZwi lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
DataNumen Word Repair 3.7 ikhishwa ngoDisemba 12, 2020
DataNumen Word Repair 3.5 ikhishwa ngoNovemba 2, 2020
DataNumen Word Repair 3.4 ikhishwa ngoNovemba 4, 2019
DataNumen Word Repair 3.3 ikhishwe ngoMeyi 23, 2019
DataNumen Word Repair 3.2 ikhishwa ngoMashi 14, 2019
DataNumen Word Repair 3.1 ikhishwa ngoJanuwari 21, 2019
Ukusekela iZwi 2019.
Thuthukisa injini yokuhlaziya.
DataNumen Word Repair 3.0 ikhishwe ngo-Okthoba 25, 2018
Thuthukisa ukubuyiswa kwama-indenti endima.
DataNumen Word Repair 2.9 ikhishwa ngo-Agasti 25th, 2018
Thuthukisa ukuvuselelwa kwemibhalo.
DataNumen Word Repair 2.8 ikhishwa ngoJulayi 16, 2018
Amaprosesa asekelwa yi-Word for Office 365.
DataNumen Word Repair 2.7 ikhishwa ngoJanuwari 18, 2018
Ukusekela ukuthola eminye imininingwane.
DataNumen Word Repair 2.6 ikhishwa ngoNovemba 9, 2017
Ukusekela iWindows 10.
IHhovisi lokuSekela i-2016.
DataNumen Word Repair 2.5 ikhishwa ngoJulayi 3, 2015
DataNumen Word Repair 2.1 ikhishwa ngoJulayi 20, 2013
Ukusekela ukufaka isithombe kudokhumenti etholakele.
Sekela izinhlamvu zase-Asia.
DataNumen Word Repair 2.0 ikhishwa ngoJuni 8, 2013
Sekela amafomethi we-Word 2007, 2010 no-2013.
DataNumen Word Repair 1.1 ikhishwa ngoJuni 4, 2005
Ukusekela ukulungisa imibhalo ye-Microsoft Word 2003.